क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गर्दा अपमान भएको भन्दै सप्तरीमा आफ्नै श्रीमतीलाई आगो लगाए « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
विवाह भोजमा गएका युवकको हत्या गर्ने ७ जना विरुद्ध कर्तब्य ज्यान मु द्धा दर्ता
क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गर्दा अपमान भएको भन्दै सप्तरीमा आफ्नै श्रीमतीलाई आगो लगाए
युवतीको अवस्था गम्भीर
थाहा अनलाइन August 30, 2020 मा प्रकाशित
सप्तरी / १४ भदौं ।
भारतबाट फर्केकाले क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गर्दा श्रीमानले मट्टीतेल छर्केर आगो लगाउँदा जलेकी सप्तरीकी युवतीको अवस्था गम्भीर बनेको छ । उनको लहानमा उपचार हुन नसकेपछि शनिबार काठमाडौं लगिएको छ ।
सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–३ लक्ष्मीपुरकी २५ वर्षीया वसन्ती सदालाई उनका पति २९ वर्षीय दीपेन सदाले मट्टीतेल छर्केर आगो लगाएका थिए । लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालमा सामान्य उपचार गराएपछि घरमा बस्दै आएकी वसन्तीको अवस्था गम्भीर बनेको हो ।
लहान र विराटनगरमा उपचार हुन नसकेपछि सुरुंगा नगरपालिकाले उनलाई शनिबार एम्बुलेन्समा काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित नेपाल क्लेफ्ट एन्ट बर्न सेन्टरमा पठाएको छ । उनका आमाबुबा मनभरन र सोनावती सदा पनि सँगै गएका छन् ।
दीपेन ४ साउनमा भारतको पन्जाबबाट घर फर्केका थिए । उनलाई वसन्तीले क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेकी थिइन् । क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गर्दा अपमान गरेको भन्दै ५ साउन बिहान वसन्तीको शरीरमा मट्टीतेल छर्केर आगो लगाएको उनकी आमा सोनावतीले बनाइन् । ‘शरीरमा मट्टीतेल छर्केपछि ज्यान जोगाउन भागेकी थिइन् । लखेट्दै सलाई कोरेर आगो लगाएछन्,’ सोनावतीले भनिन् ।
आगोले उनको घाँटीमुनि र कम्मरमाथिको भाग जलेको छ । आगो लगाएको दिन उनलाई लहानस्थित रामकुमार–उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँ सामान्य उपचारपछि ६ साउनमा विराटनगर लगिएको थियो । तर, विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालले भर्ना नगरेको सोनावतीले बनाइन् । त्यसपछि घरमा राखिएको थियो ।
उनको अवस्था गम्भीर बनेपछि ८ साउनमा राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ‘निको हुँदै थियो । अस्पतालले कोरोनाको जोखिम रहेको भन्दै घर पठायो,’ उनले भनिन् ।
२५ साउनमा अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि उनलाई घरमै राखिएको थियो । उनको अवस्था झन्झन् बिग्रिन थालेपछि फेरि १० भदौमा लहानस्थित राजकुमार–उपमाप्रसाद स्मारक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । ‘घरमा राख्दा नाजुक भएपछि फेरि अस्पताल ल्याएका हौँ,’ उनकी आमा सोनावतीले भनिन् ।
लहान अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनील कुसवाहले सक्दो उपचार गरिएको बताए । ‘अहिलेसम्म अस्पतालकै आन्तरिक स्रोतले उपचार गरेका छौँ । सक्दो कोशिस ग¥यौं, तर सुधार आउन नसकेपछि काठमाडौं रिफर गरेका छौं,’ डा. कुसवाहले भने । वसन्तीको शरीरको ५५ देखि ६० प्रतिशत भाग जलेकाले सुविधायुक्त अस्पतालमा पठाएको उनले बताए ।
आर्थिक अभावले उनको उपचार गर्न समस्या परेको सोनावतीले बताइन् । सुरुंगा नगरपालिकाले एम्बुलेन्स र सामाजिक संघसंस्थाले ६५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर काठमाडौं पठाएका हुन् । अहिले सहयोग गरेर पठाए पनि काठमाडौं उपचार गर्न आफूसँग पैसा नभएको उनकी आमाले दुःखेसो गरिन् ।
वसन्तीको शरीरमा मट्टीतेल छर्केर आगो लगाई हत्या गर्न खोजेको अभियोगमा दीपेनलाई पुर्पक्षका जेल चलान गरिएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशमा बिहीबार जेल चलान गरिएको कडरबोना इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर रामराजा केशरीले बताए ।
वसन्तीका बुबाले दिएको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको इन्स्पेक्टर केशरीले बताए । आफन्तजन र स्थानीय बासिन्दाले वसन्ती आफैले आगो लगाएको भन्दै दबाब दिए पनि प्रहरी अनुसन्धानमा दीपेनले नै आगो लगाएको खुलेको र उनले पनि स्विकारेको इन्स्पेक्टर केशरीले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा फरार व्यक्ति ९ वर्षपछि पक्राउ
खानेपानीको कुवामा समेत छुवाछुत , जनप्रतिनिधिको अझैं मौन अवस्था